Isbedelada Suuqgeynta Video-ka ee 2021 | Martech Zone
Isbeddellada Suuqgeynta Fiidiyowga ee 2021
Khamiista, Febraayo 25, 2021 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Fiidiyowgu waa hal meel oo aan runtii isku dayayo inaan kor u qaado sanadkan. Waxaan dhawaan sameeyay podcast leh Owen oo ka tirsan Iskuulka Suuq-geynta Fiidiyowga wuuna igu dhiirrigaliyay inaan sameeyo xoogaa dadaal dheeri ah. Waxaan dhawaan nadiifiyay kanaalkeyga Youtube-ka aniga iyo shaqsi ahaanba Martech Zone (fadlan rukumo!) oo waxaan sii wadi doonaa inaan ka shaqeeyo sidii loo heli lahaa fiidiyowyo wanaagsan oo la duubo iyo sidoo kale inaan sameeyo fiidiyoow badan oo waqtiga dhabta ah.
Aniga ayaa dhistay xafiiska guriga sanadkii hore oo iibsaday a Logitech BRIO Ultra HD Webka oo ay la socdaan Ecamm Toos ah. Labaduba waxay bixiyaan sawir layaableh xafiiskayguna runti wuxuu umuuqdaa mid fiiqan… marka anigu cudur daar uma haysto inaan! Waxaan balan qaadayaa inaan sii wadi doono ka shaqeynta arintaas. Way adag tahay in la ilaaliyo daabacaada, Podcast-ka, iyo ganacsigeyga… laakiin waan ogahay inaan ka faa'iideysan doono dadaalkeyga.
Waxaa jira tirakoob xoog leh oo taageera dadaalada suuqgeynta fiidiyaha:
Sida ugu badan 85% ganacsiyada isticmaashay suuqgeynta fiidiyowga hal dhinac ama mid kale sanadka 2020. Taasi waa ilaa 24% laga bilaabo kaliya 4 sano ka hor.
99% ganacsiyada Fiidiyowga la isticmaalay sanadkii hore waxay yiraahdaan waxay qorsheynayaan inay sii wadaan… marka sida iska cad waxay arkayaan waxtarka!
92% ganacsiyada u tixgeliso inay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadooda suuq geynta guud.
Noocyada Suuqgeynta Fiidiyowga ee Caan ka ah
72% ee suuqleyda isticmaalaya video abuura fiidiyeyaasha sharraxa.
49% ee suuqleyda isticmaalaya video abuura fiidiyowyo soo bandhigid ah.
48% ee suuqleyda isticmaalaya video abuura fiidiyowyo markhaati ah.
42% ee suuqleyda isticmaalaya video abuura iibinta fiidiyowyada
42% ee suuqleyda isticmaalaya video abuura xayeysiis video ah.
Isbeddellada Fiidiyowga ee ugu sarreeya:
Isticmaalka fiidiyowga ayaa sii kordhaya!
Toos u-socodsiinta ayaa dhaqaaqday.
Fiidiyowyo qaab-gaaban ah ayaa sii wada inay xukumaan dhammaan barnaamijyada.
Waxyaabaha ay isticmaaleyaashu soo saaraan ayaa kaxeynaya hawlgelinta iyo beddelaadyada.
Sababtoo ah ka shaqeynta guriga iyo faafka, fiidiyowyada waxbarashada iyo fiidiyowyada tababarka ee internetka ayaa ku sii kordhaya aqbalaadda iyo caannimada.
Sannadka 2020, xayeysiinta fiidiyowga ee Mareykanka ayaa gaartay $ 9.95 bilyan. Tan waxaa la filayaa inay kordho 13 boqolkiiba ilaa $ 11.24 bilyan sanadka 2021 (Statista, 2019).
Fiidiyowyadu waxay wadaan is-beddel, 80% iyaga ka mid ah waxay yiraahdaan dadaalkooda suuq-geynta fiidiyowga ayaa si toos ah u dhaliyay kororka iibka, 83% sidoo kale waxay yiraahdaan waxay helayaan hoggaanno badan.
Suuqa AR iyo VR ayaa la saadaalinayaa inay koraan sannadaha soo socda oo ay gaaraan $ 72.8 bilyan sanadka 2024 (Statista, 2020).
Fiidiyowyada la adeegsan karo ayaa soo kordhaya.
qiyaastii tobankiiba toban qabanqaabiyeyaashu waa inay u wareejiyaan dhacdadooda khadka tooska ah ee sanadka 2020 iyada oo qayb ka ah tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka fayraska (PCMA, 2020).
Oberlo, oo ah barxad aad u wanaagsan oo ganacsatada loogu talagalay inay wax ku bartaan, ku dhisaan kuna kobciyaan ganacsigooda hoos u dhigista ecommerce, ayaa baaritaan ku sameeyay isla markaana soo ururiyey xogtan faahfaahsan ee ku saabsan sida suuqgeynta fiidiyowga ay ugu sii socoto is beddelka 2021.
Ku biir Orberlo si bilaash ah!
Tags: ar videosfiidiyow saameyn lehFiidiyowyada Suuqgeyntaoberlofiidiyowyo gaar ahfiidiyowga dhabta ahsheekooyinmuuqaal toosansuuqgeynta fiidiyowgatirakoobka fiidiyowgaisbeddellada fiidiyowgavr vidiyo
Bulshadda Warbaahinta Bulshadda: Maxay Ahaayeen Barxadaha Warbaahinta Bulshadeed ee Ugu Weyn 2020?
TrueReview: Ururi faallooyinka si fudud oo kobci sumcaddaada iyo aragtida meheraddaada